Home » Lahatsoratra farany farany » Divay & Fanahy » Misotroa divay bebe kokoa. Fanampiana hamboly toekarena manerantany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Vaovao • Tourism • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Divay & Fanahy
Misotroa divay bebe kokoa
Ny taona 2020, ary izaho, ankoatry ny hafa, dia nandany 326.6 miliara dolara amerikana tamin'ny divay. Noho ny areti-mandringana, isika mpisotro divay dia mahita fampiononana amin'ny fisotroana divay bebe kokoa, manosika ny vola miditra amin'ny vinavina mitentina 434.6 tapitrisa dolara amerikana tamin'ny taona 2027, izay nampisondrotra 4.3 isan-jato teo anelanelan'ny 2020-2027.
Ny amerikana dia misolo tsenan-divay tombanana ho 88 $ US $ (2020) raha i China (toekarena faharoa lehibe indrindra manerantany) dia vinavinaina hahatratra US $ 93.5 miliara amin'ny 2027.
Japana sy Kanada dia vinavinaina hitombo 1.3 isan-jato sy 3.1 isan-jato eo anelanelan'ny 2020-2027.
Alemana dia mety hitombo 2.2 isan-jato eo ho eo mandritra io fotoana io.
Divay divay (ie, Sauternes / France; Tokaji Aszú / Hongria; Muscat / Italia) dia sokajy mitombo any Etazonia, Canada, Japan, China ary Europe ary antenaina hitombo 2.8 isan-jato. Ireo tsena isam-paritra ireo dia maneho ny haben'ny tsena mitentina US $ 43 miliara (2020) ary mety hitombo hatrany amin'ny US $ 53 miliara amin'ny faran'ny 2027 (businesswire.com).
Raha tsy maintsy nikatona ny orinasa fanodinana divay sasany noho ny areti-mandringana, ny ampahatelony teo ho eo no nahavita nivarotra tsara kokoa noho ny tamin'ny taona lasa. Ireo mpamokatra lehibe kokoa dia namory sy nanatsara ny fahaizany nametraka divay tao anaty tavoahangy, teny amin'ny talantalana, ary teny am-pelatanan'ny mpanjifa.
Be ny fanamby amin'ny varotra sy fizarana: tsy nanana vavahady fisakafoanana sy fisakafoanana hotely intsony ireo mpamokatra premium sy lafo vidy, nakatona ny efitrano fanandramana ary tsy ampy vokatra ny mpamokatra lehibe hamindrana ireo fivarotana sy fivarotam-panafody. Ny morontsiraka andrefana dia niaina afo izay nanomboka tany California ary niitatra nanerana an'i Oregon atsimo nanimba voaloboka an'hetsiny taonina tany amin'ireo fanjakana ireo.
Ny vaovao ratsy dia nifandanja tamin'ny vaovao tsara miaraka amin'ny tsaramaso famokarana famokarana famokarana Internet ateraky ny latsaky ny 1 isanjaton'ny varotra hatramin'ny 10 isanjaton'ny varotra manontolo. Nahazo antso ho an'ny vokatra ny famokarana divay miaraka amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa ary ny fivarotana an-tarobia dia nanjary loharanom-bola manan-danja nandritra ny indray alina tamin'ny fivarotana horonan-tsary niomerika nisolo traikefa manokana manokana.
Tsy nanjavona ireo olana mitohy manerana ny indostria. Nitohy ny hetsika fanoherana ny alikaola, tanora mpanjifa salama saina nanohy nipetraka teo amin'ny sisiny, ary ny tsy fisian'ny fampiasam-bola amin'ny varotra niomerika dia nitaky fitandremana. Eo ihany koa ny ahiahy amin'ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovana maina, ny tsy fahampian'ny kojakoja manerana ny solaitrabe, ny fiakaran'ny vidiny sy ny fotoana fandefasana tavoahangy fitaratra, vata hazo, boaty ary paleta.
Ny mpamatsy sasany dia mangataka amin'ny mpanjifa hifindra amin'ny hazo baoritra; na izany aza, misy ny tsindry amin'ny taratasy sy baoritra raha ny fe-potoana sy ny vidiny no resahina. Amin'ny tranga sasany, nitombo 50 isan-jato ny akora. Ireo mpanamboatra fitaratra dia nampiadana ny famokarana tamin'ny taona 2020, ary tsy manantena ny fanarenana matanjaka izy ireo atsy ho atsy. Miaraka amin'ny fisotroan-dronono boomera maro an'isa noho ny Covid, nanjary nanakiana be ny filàna lehilahy sy vehivavy tanora kokoa ho lasa mpanjifa divay.
Gazety Crystal Ball
Misy ho avy mamirapiratra ho an'ny indostrian'ny divay, na izany aza, ny zava-misy eo amin'ny tsenan'ny morphing dia tokony horesahina. Manomboka amin'ny taona 2020 ary mandroso, betsaka ny olona miasa ao an-trano, ny mpifindra monina hifindra amin'ny tanàna ambanivohitra ary ireo fironana mihombo ireo dia midika fa ny fividianana amin'ny Internet dia hampiala ny mpanjifa amin'ireo fantsona efa misy. Hiverina ny varotra trano fisakafoanana satria lasa tsy dia henjana loatra ny famerana miaraka amin'ireo mponina manohana ny fisakafoanana any ivelany; na izany aza dia mila faharetana ny fiandrasana ny fiverenan'ireo mpizahatany. Ny trano fisakafoanana dia mety hanova endrika ny serivisy, miala amin'ny maodely mipetraka amin'ny serivisy ho an'ny paikady vaovao ahazoana fidiram-bola indrindra ny fanaterana trano sy ny maodelin'ny to-go; na izany aza, ireo endrika ireo dia tsy mandrisika ny fivarotana alikaola izay miteraka hotely fisakafoanana mampihena ny fanatobiana divay sy ny fanalefahana tolotra.
Ny trano fisakafoanana tsy miankina kely no voa mafy indrindra ary izy ireo no teboka voalohany amidy amin'ny divay vokarin'ny orinasa famokarana divay kely. Ny trano fisakafoanana nandresy dia ny drive-thru, pickup curbside ary / na ny famandrihana sy fampiharana an-trano (toy ny pizza, delis, camion sakafo, sakafo haingana ary fivarotana kafe). Ny tahan'ny fanidiana trano fisakafoanana lehibe indrindra dia ny fanjakana manana fanofana an-tanandehibe (California, Nevada, Hawaii) ary raha ny filazan'ny Yelp, 61 isan-jaton'ny fanidiana trano fisakafoanana no haharitra; na izany aza, ny renivohitra vaovao dia azo inoana fa avy amin'ireo mpandraharaha izay hanomboka fanombohana ary, mandritra ny 4-5 taona, dia manolo tsikelikely ireo fananana mihidy maharitra.
Misy ny fanantenana fa ny governemanta amin'ny tanàn-dehibe dia hanohy hamela ny fanidiana / fanitarana arabe ho an'ny fisakafoanana any ivelany na dia nanamarika aza ny fikarohana Mintel (septambra 2020) fa efa ho ny 60 isanjaton'ny fisakafoanana no tsy mahazo aina any ivelany. Mba hamporisihana ny fisakafoanana anaty trano dia nandany vola be ny trano fisakafoanana hametrahana rafitra fanadiovana ny rivotra. Na ny rafitra filtration efa mandroso ve dia hamporisika ny fisakafoanana hiverina amin'ny traikefa fisakafoana eo amin'ny takolaka no mbola hofaritana. Mandritra izany fotoana izany dia mifantoka amin'ny fisakafoanana-to-mandeha, serivisy fitsangatsanganana ary ny pickup curbside ny indostria.
Ireo mpandeha raharaham-barotra dia ivon-toerana lehibe ahazoana trano fandraisam-bahiny, kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy trano fisakafoanana any amin'ny tanàna lehibe ary fivarotana divay amin'ireo sehatra ireo dia toa tsy hahita fitomboana raha tsy misy an'ity tsena ity. Ao anatin'ny fe-potoana fanarenana 2+ taona vinavina, ny dia amin'ny raharaham-barotra dia mety ho fohy kokoa ary kely kokoa miaraka amin'ny hetsika varotra indostrialy lehibe ho avy eo.
Araka ny voalazan'i Nielsen, $ 1.02 ny vidin'ny labiera 12-ons eo ho eo, $ 0.88 ho an'ny fanompoana fanahy 1.45- grama ary $ 1.51 ho an'ny divay 5-ons. Midika izany fa ny divay dia 72 isan-jato lafo vidy kokoa ho an'ny fanompoana ary manazava ny antony ny vidiny ambany isaky ny fanompoana dia ampahany mazava amin'ny tantaran'ny fahombiazan'ny fanahy. Miaraka amin'ny safidy fisakafoanana kely sy / na kely kokoa ary safidin'ny fisotroana be olona, ​​ary fitomboan'ny entina, azo inoana fa hihoarana sy hanamora ny lisitry ny zava-pisotro misy alikaola koa.
Ny taham-pitomboan'ny tavoahangy 750-milliliter dia nidina niaraka tamin'ny haben'ny fonosana kely kokoa toy ny tavoahangy 375-milliliter, Tetra Packs, can ary tavoahangy 500-milliliter. Ny habe kely kokoa dia nitombo tamin'ny lazany pre-covid ary mety handray ny fanekena handroso.
Raha tsy dia malaza intsony ilay tavoahangy 750-milliliter - inona no mitombo? Endrika lehibe kokoa - ny zava-drehetra mihoatra ny sokajy 1.5-litera indrindra ny vondrona 2 na 3-litatra izay ahazoana kitapo anaty kitapo misy fivoarana 50+ isan-jato.
Ny filalaovana soatoavina dia mifantoka amin'ny fampihenana ny vidin'ny fonosana. Rehefa miala sasatra ny boomera dia hanatevin-daharana an'arivony taona izy ireo amin'ny maha mpanjifa azy ireo ary hanova ny fanjifana sy ny fandaniana; na izany aza, sarotra ny misotro divay tsara ary mifamadika amin'ny traikefa kely kalitao… io no fonosana 3-litatra Premium mahafeno io filàna io. Ireo mpanjifa tanora mitandrina kokoa dia mety hahita ny boaty premium 3-litra vidiana tsara ary ho an'ny fianakaviana tanora mijanona ao an-trano hisakafo atoandro sy sakafo hariva, ny boaty premium dia mety ho valiny mety.
Chardonnay dia manohy ny varietal malaza indrindra; na izany aza, ny tahan'ny fitomboany dia mitohy mitotongana 2.7 miiba; merlot dia mampiseho ny fihenan'ny ratsy indrindra - efa ho 10 isan-jato. Ny voninkazo dia mipoitra miaraka amin'ny tahan'ny fitomboana ambany ambany aotra.
Ny blends mena dia niverina indray tamin'ny taona 2020 taorian'ny fihenan'ny taona 2019 ary naneho fitomboana 3.9 isan-jato. Ny divay mamy sy manokana dia mampiseho fitomboana mahavariana indrindra amin'ny divay miorina amin'ny agave (divay vita amin'ny agave manga mihamangatsiaka; nohamafisin'ny fifangaroana tamin'ny blanco tequila) izay mamoaka ny sokajy divay / fanahy ary mampiala ny lazan'ny tequila sy margarita mampiseho fitomboana 100 isan-jato. Ny divay Agave dia ambany noho ny alikaola noho ny tequila ary milalao amin'ny mpanjifa saina salama mitady kaloria kely. Ny vokatra dia misarika ihany koa ireo mpanjifa Hispanika efa zatra ny vokatra namidy tany Mexico. Ny fitohizan'ny laza dia ny prosecco, sangria ary sauvignon blanc.
Boomera zazakely (70 isan-jaton'ny vola azo ampiasaina ary 50+ isan-jaton'ny harena any Etazonia) no mpanjifa divay betsaka indrindra. Iray isan-jato monja amin'izao fotoana izao no manasaraka ny fanjifan'izy ireo amin'ny Gen X (teraka tany am-piandohan'ny taona 1960 ka hatramin'ny faran'ny taona 1970 ka hatramin'ny fiandohan'ny taona 1980) ka tsy azo raisina ho vondrona lehibe. Millennial (teraka teo anelanelan'ny 1981 sy 1996) no fotoana lehibe indrindra hitomboan'ny indostrian'ny divay amerikana izay vao nanomboka naneho fahalianana tamin'ny sokajy divay. Ity no vondrona izay mila mientanentana amin'ny divay mba hahitan'ny indostria ny tahan'ny fitomboana niainana nandritra ny 20 taona hatramin'ny 1994 ka hatramin'ny 2014.
Ny millennial dia tsy mavitrika amin'ny sokajy divay premium na dia mahery fo amin'ny fividianana entana lafo vidy aza izy ireo; manodidina ny 20 isanjaton'ity vondrona ity no mihinana divay na dia 33 isan-jato aza no mividy entana lafo vidy. Ny fikarohana dia manolo-kevitra fa ny millennial dia miadana mitsambikina amin'ny sehatry ny fividianana divay noho ny firoboroboana mialoha ny labiera sy ny fanahy, fanontaniana momba ny olana ara-pahasalamana mifandraika amin'ny fisotroana alikaola ary ny fahatarana amin'ny fametrahana kariera, fianakaviana ary harena raha ampitahaina amin'ny taranaka teo aloha.
Ny indostrian'ny divay dia tokony hanamarika fa ny mpanjifa tanora dia maniry bebe kokoa amin'ny marika tohanany. Na dia mila mampiseho ny hareny sy ny fahombiazany aza ireo mitady boomers, dia aleon'ny millennial ampahafantarina azy ireo ny momba ny tany, ny datin'ny fiotazana, ny pH, ny mpanamboatra divay ary ny divay divay - mba hahafantaran'izy ireo fahalalana sy fahalalana eo amin'ireo namana sy mpiara-miasa nefa tsy raisina ho “seho eny. ”
Ny orinasa mpamokatra divay liana amin'ny fisamborana ny sehatry ny tsena tanora dia tokony hifantoka amin'ny hetsika toy ny fahamarinana ara-tsosialy, ny fitoviana sy ny fahasamihafana, ny rano fanodinana, ny fisorohana ny fampiasana glyphosate, ny fahazoana mari-pahaizana LEED, amin'ny fampiasana fomba fambolena biodynamika sy biolojika. Amin'izao fotoana izao, saika tsy misy an'io fampahalalana io no miseho amin'ny varotra, fifandraisana amin'ny daholobe na fanentanana amin'ny marketing na amin'ny tranokalan-divay.
Mihoatra ny Terroir
Amin'ny folo taona ho avy, ny indostrian'ny divay dia hanjary zava-baovao. Hisy fitomboana hatrany miaraka amin'ireo mpanjifa sinoa ao anatin'izany ny famokarana divay vaovao (izany hoe: faritry ny tanimbary Silver Heights / Ningxia Hui; Faritra mahaleo tena an'i Grace Vineyard / Shanxi Provence; Chateau Changyu AFIP Global / Distrikan'i Miyun, Beijing), ary nitombo ny fihinanana.
Ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fananganana ny teknolojia ataon'ireo mpamboly, mpanao divay ary mpivarotra dia hisy fiantraikany amin'ny fomba fividianana sy fisotro divay. Ny fiovan'ny toetrandro dia mamorona faritra divay vaovao amin'ny latitude izay heverina fa tsy mety amin'ny fanaovana divay. Suède, Norvezy ary Netherlands dia manomboka mamorona divay kilasy eran'izao tontolo izao noho ny fironana mafana.
Amin'ny fomba fijery teknolojia, ny drôna sy ny robot dia hampitombo ny fisian'izy ireo ao amin'ny tanimboaloboka. Ny teknolojia vaovao dia manatsara ny fizotran'ny fitomboana miaraka amin'ireo sensor ao anaty tany izay mitarika amin'ny fandrosoana amin'ny fitantanana ny tany sy fanampiana ireo mpamboly voaloboka hamaritra ny fotoana mety indrindra amin'ny fanondrahana voaloboka. Ny drôna manidina dia manamarina ny famantarana ny aretina sy ny haintany ary ny robot, miaraka amina tanana toy ny hety mitaingina ny tanimboaloboka mba handrantsana voaloboka.
Mihabetsaka ny mpanamboatra divay manomboka ny fomba fambolena maharitra amin'ny alàlan'ny sasany mampiasa herin'ny masoandro ao amin'ny famiazam-boaloboka ary ny sasany kosa mampifanaraka ireo rojom-pitehirizana logistika amin'ny fitadiavana vahaolana maharitra maharitra eco izay hampihena ny dian-tanan'ny karbonina manontolo.
Rehefa lasa manerantany ny mpisotro divay, dia tsy miraharaha ny appellation na ny fermentation na ny toetra hafa mampiavaka ny divay izy ireo. Izy ireo dia mitady divay mora mora hatonina izay mahatsapa tsara. Amin'ny tranga maro, ny marika divay dia lasa mitovy amin'ny marika supermarket nentim-paharazana ary midika izany fa ho lasa mahafinaritra, manavao ary manan-danja kokoa ny marika divay.
Mba hamahana ny olan'ny sandoka divay, ny teknolojia dia mamorona rafitra fanamarinana sy fitokisana miorina amin'ny blockchain. Ny teknolojia blockchain dia birao fizarazarana voatsinjara izay mirakitra ny maha-fananana nomerika maharitra sy tsy azo aleha, mahatonga azy io ho fomba iray hanamarinana tavoahangy misy divay tena tsara (izany hoe Chai Wine Vault).
“Omeo divay aho, na avelao aho.” - Rumi